Maxaad iga indha saabaysaa hadaan ku garanayo inaad adigu jeceshahay - Talo Ragga Qurxinta leh | Ragga Stylish
Maxaad ii indha tiraysaa hadaan ogaado inaad jeceshahay
Alicia tomero | 27/07/2021 18:58 | Lamaanaha iyo Galmada
Jacaylku ma lahan sharciyo loo dejiyey, soojiidashada qofka waxaa laga yaabaa inaanay lahayn bareeg. Waxaad dareemi kartaa qiiro ama jacayl Qof garanaya inuu ku jecel yahay, hase yeeshe, wuu iska indhatiri karaa mararka qaarkood. Xaqiiqdii waxaad horeyba u bixisay horumarkaagii ugu horreeyay waxaadna ogaatay xoogaa waraaqo ah, laakiin wali ma hubtid inaad waxbadan bixinaysid iyo inkale waxaad u baahan tahay calaamado kale oo badan.
Cutubkan dhexdiisa, sida loo is waafajiyo xiriirka suuragalka ah waa adag tahay in la xaliyo, maadaama ay u horseedayso aqoon aan dhammaad lahayn oo ay tahay in la falanqeeyo. Qaar badan oo iyaga ka mid ah nooca shakhsiyadda qofka ayaa lala xiriiriyaa loomana soo celiyo noocyo kale oo duruufo dibadeed ah. Si loo xaliyo shakiyada qaar, halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa furayaal laxiriira hubanti la'aan noocan ah.
1 Waan ogahay inuu i jecel yahay laakiin mararka qaar wuu i iska indhatiraa
1.1 Ma tihid qofka ku habboon
1.2 Qofku waa xishood badan yahay wuxuuna qabaa amni darro badan
1.3 Waxaad ka baqeysaa xiriir iyo diidmo macquul ah
1.4 Caqligaaga shucuureed si heer sare ah looma horumarin
2 Maxaa la sameeyaa? Ma jiraa qof in uu qaato quudinta?
Waan ogahay inuu i jecel yahay laakiin mararka qaar wuu i iska indhatiraa
Hubaal inaad qof la kulantay waxayna u muuqataa taas soojiidashada dhow. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo wax walba ay ku bilaabmeen cagta midig, si lama filaan ah bilaabaan inuu ku badalo ama ku iloobo. Waa wax la yaab leh, maxaa si lama filaan ah ugu sii wada xiriiri waaya oo marwalba waa riixis iyo jiidis. Shaki la'aan waxaad dareemeysaa lumis mana taqaanid sida loola wajaho xaaladda maxaa yeelay runti waad jeceshahay qofkaas.
Waxaa jira dad u baahan muddo dheer si ay u awoodaan inay xiriir rasmi ah ka yeeshaan taasna macnaheedu waa waqti iyo meel. Waxaa laga yaabaa in si ka sii badan laguu bilaabay oo aadan dhib u qabin sameynta ballanqaad iyo xiriir. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad u baahan waqti dheeri ah, doonaya inay kula joogaan, ku dhageystaan ​​oo wax dareemaan, laakiin waxay u baahan yihiin qaanso ay ku fikiraan.
Ma tihid qofka ku habboon
Xaqiiqdii waxaad tahay qof leh tayo wanaagsan qofka xiisaynayaana ma doonayo inuu ku waayo, waa taas sababta qayb ahaan waa kula jirtaa. Waan ogahay qodobkan iyo aragtidan inay tahay mid aan caddaalad ahayn, laakiin dad badan ayaa raadiya qof kale "ka wanaagsan" oo ku dhaca astaamahooda. Taasi waa sababta ay u jiri doonaan waqtiyo madadaalo mararka kalena wuu kaa fogaan doonaa. Mawqifkani wuxuu yeelan karaa xal suurtagal ah wax badana wuu saarayaa qaybtaada. Hadaad runtii jeceshahay, waad awoodaa qof ahaan weli kaa adkaado, Iskudhici oo noqo mid xasaasi ah, laakiin waa haddii aad u maleyneyso inay u qalanto.
Qofku waa xishood badan yahay wuxuuna qabaa amni darro badan
Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay qof xishood badan iyo ha dhicin inaad tilaabada koowaad qaado. Amni-darradu waxay la socon kartaa gacanta qofkaas xishoodka badan. Waxaa jira dad umuuqda kuwo aad isku kalsoon oo xitaa islaweyni iyo islaweynid. Laakiin waan ognahay inay taasi cakis noqon karto, waxaa laga yaabaa inaadan haysan qalab iyo xirfado ku filan si loo wajaho xiriir jaceyl.
Waxaad ka baqeysaa xiriir iyo diidmo macquul ah
Haddii qofkaasi kaa fogaanayo Waxaa laga yaabaa inaanan aqoon sida ugu wanaagsan ee aan sameeyo. Taasi waxay kaa dhigeysaa mid aan amni aheyn oo xiriirka qatarta ah waxaa laga yaabaa inaad dareentay diidmo ama diidmo oo aad waqti xun ku qaadatay. Kiiskan waxaa laga yaabaa inuu ka baqo diidmada, wax walba marka hore si fiican ayey u shaqeyn karaan ka dibna wax walba way baaba'ayaan marka la helo is-waafajinno.
Caqligaaga shucuureed si heer sare ah looma horumarin
Waxaa jira dad aan u muujin shucuurtooda si la mid ah kuwa kale. Ma soo gudbin karaan shucuurta qaarkood xilligan ama iyagu ma xakamayn karaan sida ay naftooda u maamuli karaan. Way ku dhici kartaa qofkaas aad taqaan, waxaa jira maalmo u muuqan kara qof caadi ah iyo kuwa kale oo ay ku jiraan magan galo iyadoo aan cidna waxba loo sheegin, maxaa yeelay ma fulin karto xiriir bulsheed ama mid dhex-dhexaad ah. Waxaa laga yaabaa inaad taariikh sii joogtay oo aan kaaga tagay maalintaas adoo taagan maxaa yeelay ma aanan haysan agabkii lagama maarmaanka u ahaa inaan wajaho
Maxaa la sameeyaa? Ma jiraa qof in uu qaato quudinta?
Tani guud ahaan waa jawaab fudud, maxaa yeelay dhacdooyinka waxay u dhacaan si iskood ah iyo kiis kasta waxaa lagu xaliyaa iyadoo loo eegayo awoodaha iyo duruufaha mid walba. Haddii wax walba aan go'aan laga gaarin oo aadan aqoon waxa la sameeyo, waa inaad garataa xadka lagu soo rogayo iyo sida loo xaliyo. Midda ugu horreysa oo dhan waa inaad dulqaad yeelato jaahwareerkaasna kuma koobmayo ama ku dhibaya.
Way adag tahay in la xakameeyo xaaladdan, maaddaama ay jiraan dad qaada xiriir ama dareen jacayl sida wax u gaar ah oo gaar ah. Waa inaad geesi noqota oo tallaabo qaado, hubaal waa inaad qaaddaa tallaabada ugu horreysa. Waxaad bilaabeysaa inaad hagto xiriir suurto gal ah si aad u aragto waxa dhacaya iyo haddii ay tahay inaad weydiiso waxa uu u maleynayo ama waxa uu dareemayo, Waxba kuma waayi doontid isku dayga.
Haddii aadan rabin inaad wax bilowdo, waad sugi kartaa inaad aragto waxa dhici kara, Haddii aysan waxba dhicin oo waqtigu ka soo wareego, markaa qofkaasi ma uusan dooneyn inuu kula joogo waqti kasta. Waqtiyada kale markaan ka dhaqaaqno waa marka uu bilaabo inuu muujiyo xiisaha maxaa yeelay waad ogtahay inaad wax ka maqantahay. Shaki la’aan xaaladdu way adag tahay, maxaa yeelay ma naqaano sida loo falanqeeyo xaaladda marka qof uusan siinin calaamado ama uu aad ula socdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxaad ii indha tiraysaa hadaan ogaado inaad jeceshahay
Surwaal maqaar oo loogu talagalay ragga